Apple inogadziridza Siri yeIOS, Mac, uye Apple TV ine Super Bowl 2017 Zvemukati | IPhone nhau
Hapana anogona kuramba izvozvo Siri anogona kunge ari akanakisa emubatsiri wevose vari kunze ukoZvakanaka, ichine nzira refu yekuenda kuti ive yakakwana, asi ichokwadi kuti Apple yakapa zvishoma nezvishoma mubatsiri wayo nemimwe mirairo. Funga nezvekuti Siri wekutanga aive sei uye zvese zvatingaite izvozvi ... Kunyanya nekuuya kweIOS 10 uye SiriKit, izvozvi zvese zvinoshandiswa zvinogona kutora mukana weSiri kuita kuti hupenyu huve nyore zvishoma ...
Sezvatinokuudza, ndizvo Apple ine basa rekuvandudza Siri, uye isu tinogona kuzviona mune zvakakosha zviitiko zveterevhizheni apo Apple yanga ichitarisira kuve naSiri pakukwirira kwezviitiko zvehukuru. Chinhu chinoitika neSuper Bowl, pamwe chiitiko chemitambo, uye terevhizheni, ine vateereri vazhinji pasi rese. Zvakanaka, Super Bowl 2017 ichaitika pakati pehusiku kubva Svondo kusvika Muvhuro (GMT +1), uye hongu, Apple yakangowedzera zvemukati kuSiri yeIOS, Mac, uye Apple TV inoenderana neSupp Bowl 2017.
Una Super Bowl 2017 kuti iyo Nyowani England Patriots vs. Atlanta Falcons, chimwe chinhu chatichaziva nekungobvunza Siri. Uye kwete izvo chete, kana tiri muUnited States uye tine Apple TV, isu tinongofanirwa kukumbira Siri kuti atarise Super Bowl kuitira kuti isarudze yega chiteshi kwainotepfenyurwa. Mhedzisiro, zviverengero, kana kunyangwe ndiani achazoshanda mukuzorora, ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatichaziva nekutenda kuna Siri uye zvirimo zvakaiswa neApple zvine chekuita neiyo Super Bowl 2017.
Saka ikozvino unoziva, kana iwe uri vateveri vechiratidziro chemitambo pasirese, usakanganwa kuti unogona kubvunza Siri chero mibvunzo yauinayo nezvazvo. Zvese zvimwe zvinhu, mirira na0: 30 mangwanani neMuvhuro uye unakirwe neSupp Bowl 2017. Iwe unofungei, Pachave paine Apple kushambadzira panguva yeSupp Bowl?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Apple inogadziridza Siri yeIOS, Mac, uye Apple TV ine Super Bowl 2017 zvemukati
Apple inotangisa chipo chakakosha chemaapplication edzidzo chikamu